Ego | Ihe Baịbụl Kwuru
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Amharic Arabic Armenian Bulgarian Cebuano Chichewa Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Finnish French Georgian German Greek Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Italian Japanese Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Korean Latvian Lingala Lithuanian Macedonian Malagasy Maltese Myanmar Norwegian Pangasinan Polish Portuguese Punjabi Romanian Russian Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Swahili Swedish Tagalog Thai Tigrinya Tsonga Turkish Twi Ukrainian Vietnamese Xhosa Zulu
Ego ọ̀ bụ mgbọrọgwụ ihe ọjọọ?
“Ịhụ ego n’anya bụ mgbọrọgwụ nke ụdị ihe ọjọọ niile.”—1 Timoti 6:10.
Ego bụ mgbọrọgwụ ihe ọjọọ.
Ọ bụ “ịhụ ego n’anya” na-akpata nsogbu, ọ bụghị ego n’onwe ya. Eze Sọlọmọn nwere ezigbo ego n’oge ochie. Ma, o kwuru nsogbu atọ ndị hụrụ ego n’anya na-enwe. Nke mbụ bụ iche oké echiche. “Ọtụtụ ihe onye ọgaranya nwere adịghị ekwe ya ka ọ rahụ ụra.” (Ekliziastis 5:12) Nke abụọ bụ na afọ anaghị eju ha. “Ọlaọcha agaghị eju onye hụrụ ọlaọcha n’anya afọ, ego agaghịkwa eju onye ọ bụla nke hụrụ akụ̀ n’anya afọ.” (Ekliziastis 5:10) Nke atọ bụ na ọnwụnwa na-abịara ha ka ha mee ihe ọjọọ. “Onye ọ dị ngwa ngwa ịba ọgaranya agaghị abụ onye aka ya dị ọcha.”—Ilu 28:20.
Olee uru ego bara?
“Ego bụ ihe nchebe.”—Ekliziastis 7:12.
Ego na-eme ka mmadụ nwee obi ụtọ, obi eruokwa ya ala.
Mmadụ iche na ego ga-eme ka o nwee obi ụtọ, obi eruokwa ya ala bụ otu n’ime ụzọ akụnụba si aghọ mmadụ aghụghọ. (Mak 4:19) N’agbanyeghị nke a, “ego na-egbo mkpa niile.” (Ekliziastis 10:19) Dị ka ihe atụ, anyị na-eji ego azụta ihe ndị dị anyị mkpa dị ka nri ma ọ bụ ọgwụ anyị na-aṅụ ma ahụ́ adịghị anyị.—2 Ndị Tesalonaịka 3:12.
Anyị na-ejikwa ego elekọta ndị ezinụlọ anyị. Baịbụl kwuru, sị: “Ọ bụrụ na onye ọ bụla adịghị egboro ndị nke ya mkpa ha, karịsịa, ndị bụ́ ndị ezinụlọ ya, ọ jụwo okwukwe anyị.”—1 Timoti 5:8.
Olee otú ị ga-esi jiri ego na-eme ihe bara uru?
‘Buru ụzọ nọdụ ala gbakọọ ihe ọ ga-efu.’—Luk 14:28.
Jiri ego gị na-eme ihe bara uru. (Luk 16:9) Anyị ekwesịghị ịna-emefusị ego. Anyị kwesịkwara ịna-akwụwa aka ọtọ n’ihe ọ bụla anyị ji ego eme. (Ndị Hibru 13:18) Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịna-ekowe akpa anyị ebe aka anyị ruru, anyị ekwesịghị ịhụ ego n’anya.—Ndị Hibru 13:5.
Baịbụl ekwughị na ibiri mmadụ ego adịghị mma kama, ọ sịrị: ‘Onye gbaziiri ihe bụ ohu onye gbazinyere ya ihe.’ (Ilu 22:7) Anyị ekwesịghị ịna-eme ihe ọ bụla anyị hụrụ anyị azụrụ maka na “onye ọ bụla ọ na-adị ngwa ngwa aghaghị ịdaba n’ụkọ.” (Ilu 21:5) Kama ịna-azụ ihe ọ bụla anyị hụrụ, anyị kwesịrị ịna-ewepụta ego anyị ga na-edebe, ka anyị nwee ike inwe ego anyị ga-eji na-eme ihe ndị dị mkpa.—1 Ndị Kọrịnt 16:2.
Baịbụl gwara anyị ka anyị na-enye ndị ọzọ ihe. (Luk 6:38) Ndị na-efe Chineke kwesịrị ịna-emesapụ aka maka na “Chineke hụrụ onye na-eji obi ụtọ enye ihe n’anya.” (2 Ndị Kọrịnt 9:7) N’ihi ya, “echefukwala ime ihe ọma na ịdị na-enye ndị ọzọ ihe, n’ihi na àjà ndị dị otú ahụ na-adị Chineke ezi mma.”—Ndị Hibru 13:16.
Ajụjụ asaa ga-enyere gị aka ịma ma ị̀ na-ele ego anya otú na-ekwesịghị ekwesị.
Gịnị Ka Baịbụl Kwuru Banyere Ego?